TOMATO "CORNABEL F1" (SAWIR "DULCE"): SAWIR, SHARAXAAD KALA DUWAN IYO DABEECADAHA - NOOCYO YAANYO
Tomato "Cornabel F1" - adkaysi u ah shuruudaha nooca-basbaas nooca-basbaas
Tamaandhada, oo la mid ah qaabka uumiga, ma la yaabi doonaan qof kasta. Weligaa ma aragtay yaanyo yaryar oo qaabdhis ah? Guud ahaan astaamaha "Cornabel F1" ee shirkadda caanka ah ee "Vilmorin" waxay u egtahay sidan!
Kala duwanaanshahani wuxuu u yimid suuqyadeena dhowaan, laakiin horay u suurtagashay in uu helo wax badan oo dib-u-eegis wanaagsan, iyo kuwa doonaya martida, waxaan bixinnaa faahfaahin faahfaahsan ee aan caadi ahayn ee yaanyada, oo sidoo kale loo yaqaan "Dulce".
"Cornabel" waxay ku habboon yihiin kuwa jecel yaanyada yaryar, taasi waa noocyo kala duwan.
Kuwa aan ogayn, waxaan kuu sharaxi doonaa in yaanyada noocaas ahi aysan joogsanin si ay u koraan inta lagu jiro xilliga oo dhan, siday u kala horreeyaan, waxay u koraan si aad u sareeya waxayna u baahan yihiin inay sameeyaan baadiyaha iyo qoryaha khasab ah.
Laakiin midhaha sida sida xoog leh, haysashada nidaam xidid oo horumarsan ee baadiyaha waxaa laga soo qaadi karaa wax badan oo dheeraad ah.
Kuwa ugu caansan ee yaanyada "Dulce" waa, laga yaabee, foomkooda. Waxay runtii u egyihiin sida basbaaska gaduudka casaanka ah, muuqaalkuna waa mid cajiib ah!
Dhererka miro wuxuu gaaraa 15 cm, miisaankuna wuxuu ku jiraa 200 g, laakiin mararka qaar waa badanaa. Tamaandhada waxaa la sameeyey burushyo qurux badan oo ah 4-7 gogo ', halka ay leeyihiin cabbir isku mid ah, taas oo aad u ku habboon goosashada.
Soo ogow waxa ay yihiin noocyada wax soo saarka iyo kuwa aan caddaalad ahayn ee yaanyada.
Beelaha Faransiisku waxay daacad u yihiin magaca Spanishka. Jirka waa mid aad u casiir leh, fareeshka iyo macaan, dhadhanka waa mid aad u fiican. Isla mar ahaantaana, miraha waxay ku dhowyihiin cufan sida basbaas, taas oo ay ku xiran yihiin gaadiidka iyo si fiican loo kaydiyo.
Marka la eego dhirta, "Cornabel" waxa loola jeedaa yaanyada dhexdhexaadka ah, taas oo macnaheedu yahay in miraha ay leeyihiin waqti ku filan in la quudiyo tamarta qoraxda iyo helitaanka dhadhan dhalaalaya (ka dib oo dhan, sida aad ogtahay, yaanyo goor hore waa qadar la'aan).
Laga soo bilaabo daqiiqad geedo waxaa lagu beeray dhulka si ay goosashada ugu horeysay, qiyaastii laba bilood ka gudbaan celcelis ahaan.
Ma taqaanaa? "Dulce" ee Isbanishka macnaheedu waa "macaan."
Ka mid ah faa'iidooyinka badan ee hybrid waa in la caddeeyo:
dhalidda sare ee xitaa marka lagu jiro xaaladaha deegaanka ee xun;
muuqaalka aan caadi ahayn iyo qaabka caadiga ah ee tamaandhada;
muddo dheer ah ee fruiting, taas oo si fiican u kala saaro tamaandhadan noocyo kala duwan;
caabbinta cudurada waaweyn iyo cayayaanka, gaar ahaan, miraayada yaanyada, fusarium wilt, lafaarta cirridka;
Gaadiidka wanaagsan iyo ilaalinta tayada miraha.
Maadaama ay jiraan faa'iido darro, waxaa habboon in la xuso farsamada beerta ee adag. Sida yaanyo yaryar oo aan caddayn, Dulce wuxuu ubaahan yahay taageero fiican waxana uu u baahan yahay dadaal culus oo si haboon u abuuraya baadiyaha, iyo wax soo saarka noocyada kala duwan waxay si toos ah ugu xiran tahay.
Intaa waxaa dheer, ogow sidoo kale qiimaha aad u sarreeya ee miraha this hybrid, taas oo sidoo kale loo aaneyn karo "yar-yar".
Sida la og yahay, calaamadda "F1" ee magaca noocyada kala duwan waxay tilmaameysaa in tani ay tahay midda ugu horeysa, ee ugu qiimaha badan ee geedka, iyo dhirta noocan oo kale ah, si ay u hadlaan, "la tuuro": ma jiraan wax laga yaabo inay ka soo baxaan abuurka yaanyada sida beeritaanka dambe iyagu ma hayaan sifooyinka qiimaha leh ee kala duwan ee waalidka.
Hubi noocyo kala duwan oo yaanyo ah "Troika", "Eagle Beak", "Madaxweynaha", "Klusha", "Rio Fuego", "Alsou", "Auria", "Japanese Truffle", "Primadonna", "Star of Siberia "," Rio Grande ".
Beerista farsameynta ee "Cornabel F1" waxaa lagu go'aamiyaa iyada oo ku xiran tamaandhada cagaaran.
Noocyada noocan ah waxaa laga heli karaa dhul furan iyo koriyo. Seeds, sida hore loogu soo sheegey, mar kasta waa in lagu iibsadaa dukaamo khaas ah.
Waa muhiim! Abuurka Tomato waxaa lagu keydin karaa iyada oo aan lumin biqilka muddo shan illaa lix sano ah, waxaad inta badan ku dari kartaa hal sanno ama labo ilaa taariikhda lagu tilmaamay xirmadda sida nafta ugu dambeysa ee shelfka (sheyga iskiis ixtiraamaya had iyo jeer wuxuu sameynayaa kaydka dib u celinta). Si kastaba ha ahaatee, waxaa fiican inaad iibsato miraha cusub sanad walba, sababtoo ah tayada geedo sidoo kale waxay ku xiran tahay kaydinta haboon.
Abuuridda abuurka on geedo bilaabmaa ugu badnaan laba bilood ka hor beerashada qorshaysan ee dhulka u furan. Tusaale ahaan, dadka degaanka dhexe, tusaale ahaan, waxa aad ku wareersan kartaa geeddi-socodkan bartamaha bisha Maarso.
Tamaandhiga tamaandhada waxay bilaabaan inay beeraan toddobaad ama labo ka hor inta aan ka aheyn kuwa caadiga ah, laakiin geedo ka baxsan had iyo jeer ma ahan kuwo aad u wanaagsan (waxaa fiican in ay ku beeri geedo dhul furan ka hor inta aanay bilaabin in ay ubaxdo).
Haddii yaanyada loogu talagalay beerista ee lagu koriyo, waxaa suurtogal ah in la bilaabo diyaarinta seedling hor inta hore.
Ka hor inta la isku daro ciidda loogu talagalay beeritaanka, waxa lagu daro macdanta ugu muhiimsan, potassium, fosfooraska, nitrogen, iyo sidoo kale bacriminta organic (peat, humus, compost) waa in la soo bandhigo. Marka geedo ay sameeyeen 1-2 caleemo run ah, jeebabka waxaa lagu fuliyaa - lagu duubo koobafyo kala duwan. Joogitaanka meel bannaan ee dhismaha geedo waa fure u ah dhalidda ee baadiyaha mustaqbalka!
Marka dhulku ka soo baxo ilaa 15 darajo si qoto dheer ee godka (10 cm), geedo waxaa lagu beeray meel joogto ah, oo horay loo adkeeyay by koobabka geedo ah balakoon ama hoos daaqad furan, marka hore muddo gaaban, iyo maalmo yar ka hor daadinta - habeenkii oo dhan .
Badanaa ereygan wuxuu yimaadaa Maajo, laakiin isbeddelada qaarkood ayaa suurtogal ah in lagu daro aagagga cimilada ee kala duwan. In lagu koriyo, xaaladaha ku habboon isu tallaalidda waxaa la abuuray ilaa bil iyo badh hore.
Ma taqaanaa? Tamaandho ma aha oo kaliya raaxada jecel ee reer Ukraine, laakiin sidoo kale ilaha wanaagsan ee dakhliga. Maanta, laba gobol oo dalka ka mid ah oo ku takhasusay beerista yaanyada, Zaporizhia (Kamenka-Dneprovskaya) iyo Kherson (Tsyuryupinsk), ayaa lagu dhisay meelo khudradeed oo cajiib ah, kaas oo dadka deegaanka si toos ah ugu yeeraya cunto-bixiye.
Ka dib markii la beero duurka, shaqada hawshu waxay bilaabmaysaa bilaabmaysa, xitaa ka hor intaadan u baahnayn inaad ka walwasho abuuritaanka taageerooyin lagu kalsoonaan karo oo yaanyo ah. Waa in sidoo kale maskaxda lagu hayaa in manjooyin joogto ah oo qallajinaya ay noqdaan kuwo horseedi kara khatarta sii kordheysa ee ku dhufta rugta leh cudurrada kala duwan ee galaya "boogaha furan."
Sababtan darteed, haddii ay jirto meel ku filan goobta, bannaanka u badan door bidaan in ay ku beeri duurka yar yar, laakiin u oggolow inay ku koraan iyada oo aan wax faragalin aadane ah.
Habka noocan oo kale ah, sida hoos lagu sheegi doono, waxay soo saartaa dalag yar yar, laakiin waxay u baahan tahay dadaal yar oo sidaas darteed waa mid ku haboon beerista ganacsiga aan ganacsiga ahayn.
Ka mid ah sifooyinka beeritaanka yaanyo "Dulce" waxa kale oo lagama maarmaan ah in la tilmaamo quudinta khasabka ah:
nitrogen si loo kordhiyo tirada cagaaran;
] potassium si loo dedejiyo horumarinta miraha;
Fosfooraska si loo xoojiyo nidaamka xididka.
Waa muhiim! Potassium ka badan tahay halis u ah yaanyada of noocyo this. Marka hore, waxay keenaysaa kororka xad-dhaafka ah ee miro-khudradda, taas oo laga yaabo inay aad u culus tahay baadiyaha laftiisa; Marka labaad, waxay ka hortagtaa dhirta ka soocista calcium, kaas oo ka soo galaya xubnaheeda ciidda iyadoo ay weheliso biyo.
Kordhinta wax-soo-saarku waa hab aad u ballaaran oo horumarinta beeraha ah. Waxaa jira habab badan oo lagu gaarsiin karo wax-soo-saarka ugu sareeya iyada oo la abaabulayo kaydka gudaha ee geedka lafteeda lana abuuro shuruudaha ugu wanaagsan ee loogu talagalay.
Xaaladdan, korodhka tirada badan ma tegi doonto waxyeellada tayada, taas oo ah, tani waa sida aan u baahannahay.
Haddii aan ka hadalno isku-dhafka "Dulce", waxsoosaarkeeda waa la kordhin karaa ilaa seddexaad oo keliya iyada oo la sii deynayo beeritaanka dhirta iyo abuuritaanka habboon ee baadiyaha ee hal mitir.
Dhirta aasaasiga ah ee geedo ayaa sidoo kale loo isticmaalaa, ka dibna jirridda ku rusheeyeen dhulka wuxuu bilaabaa inuu abuuro nidaam asal ah oo gaar ah iyo ilmo madaxbannaan oo madaxbannaan, sidaas darteed, dhalidda baadiyaha kordhay dhowr jeer.
Qaabka kale waa soo saaridda Bacriminta potash, waxay gacan ka geystaan ​​horumarinta degdegga ah ee miraha. Laakiin halkan waxaad u baahan tahay inaad sameyso boos celin. Xaqiiqdu waxay tahay in sida ku cad nooca horumarka, yaanyada (sida dhirta kale) ay u kala qaybsan yihiin daaqsinka iyo wax soo saarka. Isla mar ahaantaana, "isku dheelitir la'aanta" hal dhinac iyo jihada kale waxay ku hanjabtaa hoos u dhac ku yimaada waxtarka ugu macquulsan.
Isla mar ahaantaana, waxaa jira habab kala duwan oo xeeladeysan oo u oggolaanaya in ay saxaan xaaladda, si kastaba ha ahaatee, waxay ka duwan yihiin noocyada kala duwan ee horumarinta.
Waa muhiim! Hybrid "Cornabel F1" - tani waa yaanyo leh nooc horumar ah.
Waxay u egtahay in tani ay wanaagsan tahay, sababtoo ah laga bilaabo yaanyada waxaan ugu horreyntii ka rajeyneynaa tiro badan oo ah miraha, iyo ma kordhinayaan tiro cagaaran, taas oo soo jeedinaysa nooca dhirta.
Si kastaba ha noqotee, haddii tayada wax soo saarku ay bilaabanayaan, waxay soo socotaa dhacdadan: geedku wuxuu ku amrayaa dhammaan xoogagga muhiimka ah ee horumarinta miraha, halka koritaanka baadiyaha iyo xoojinta nidaamka xididka ay bilaabaan inay hoos u dhigaan.
Sidaa darteed, warshad daciif ah ma awoodo in ay u adkaysato miraha badan oo ay ka buuxsanto casiirka, laamihiisa waxay noqdaan kuwo khafiif ah, ubaxuna sii wadaan in la dhajiyo, mana jiraan wax fursad ah oo yaanyada cusub u bislaadaan. Haddii uu jiro horumar aad u xooggan oo tamaandheyn ah, si loo kordhiyo fruiting waa lagama maarmaan in la qaado tallaabooyin loogu talagalay dhiirigelinta jihada koritaanka daaqsinka.
Si arrintan loo sameeyo, waxaa jira tabaha soo socda:
Saacadaha u dhexeeya heerkulka hawada inta lagu jiro maalinta iyo habeenka waa in la kordhiyaa si dabiici ah, si yar u kululeyn hawada ku jirta aqalka dhirta lagu koriyo habeenkii.
Haddii heerkulka habeenkeedu ugu fiicnaado si yey u yareeyaan xajinta, waa 15-16 darajo Celsius, waa ku filan in la dhiso asal ahaan dhowr darajo, baadiguna kori doontaa.
Kobaca xayiraadda kororka ayaa sidoo kale lagu gaari karaa iyada oo la kordhiyo qoyaanka hawada iyo abuurista saameyn dheeraad ah oo lagu koriyo oo lagu yareeyo hawo gaabinta.
Xaaladdan oo kale, duurka waxay bilaabaan in ay uumi baxaan qoyaan yar, iyo si waafaqsan, waxaa ka wanaagsan inaad koraan. Run, waxaa aad u muhiim ah in aad ka taxadartid halkan, sababtoo ah qoyaan badani waa jawi wanaagsan oo loogu talagalay horumarinta fungi noocyada kala duwan oo keeni kara waxyeellada waxyeello ka badan koritaanka wax soo saar badan.
Horumarinta dhirta waxaa lagu dhiirrigeliyaa soo noqnoqoshada, laakiin gaaban muddada gaaban: baadiyaha ayaa si dhakhso ah u koraan carrada qoyan.
Waxa kale oo aad isku dayi kartaa inaad ku darto qadar dheeraad ah oo bacriminta nitrogen ah ee ciidda oo gebi ahaanba joojiya quudinta leh dioxide kaarboon (haddii ay jirto) [img
Marka la sameeyo baadiyaha, caleemaha dheeraad ah ayaa laga tagay, sidaas darteed sii kordhaya cagaaran iyo caleenta.
Qawaaniinta tirada inflorescences waa hab kale oo lagu xalliyo dhibaatada, laakiin kiiskan, ma kordhineyno koritaanka daaqsinka iyadoo yareyneysa kobaca koritaanka.
Best of dhan, oo aan sugin bilowga ubax, si aad uga saarto buro daciif ah, figradaada, sababta oo ah miraha badan oo ka mid ah baadiyaha ma awoodi doonaan inay hor istaagi karaan.
By habka, farsamooyinka noocan oo kale ah ayaa kicin kara koritaanka caleemaha cusub iyo caleemo, taas oo ah cusub, laakiin horay ugxan adag ayaa la aasaasay on yaanyada aan caddayn.
Si dushooda yaanyada ah looma dhejin, waxaa lagu talinayaa in "kudheer" ay ku taageeraan taageerada ayadoo la adeegsanayo dhar gaar ah.
Ugu dambeyntii, waxaa kale oo suurtagal ah in la kordhiyo kobcinta dhirta iyada oo la adeegsanayo xoqidda: iftiin badan, ugxan badan.
Xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo, daahyada gaarka ah ama shaashadaha ayaa badanaa loo isticmaalaa kicinta kobcinta, waxaa ugu wanaagsan in la soo saaro dhinaca koonfurta ee ugu kulul oo aan xirnayn derbiga oo dhan, laakiin qaybta hoose, waxaad ku tidhaahdaa, heerka laba mitir.
Ma taqaanaa? Dalka Maraykanka ee 1893-kii waxay xukumeen yaanyo. Xaqiiqdii, asalka khuseeya dacwada ma ahayn mid jilicsan. Nidaamkan ayaa ah in hawlaha soo dejinta ee miraha ay ka sarreeyeen khudaarta, halka kuwa soo saara tamaandheyaashu ay bixiyaan canshuurta heerka ugu hooseeya, si xaqiiqo ah u rumaysan inay soo galaan khudradda dalka. Dawladu, sida muuqata, ma rabto inay la gasho caddaalad darradaas, sababtoo ah yaanyada ma aha mid macaan oo macaan badan leh. Go'aanka maxkamada sare, tamaandhada ayaa wali si rasmi ah loo ansixiyey sida khudradda, dood doodda garsoorayaashu waxay ahayd xaqiiqda ah in mirahaas aan loo isticmaalin macmacaanka, sida miraha kale.
Iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka noocan ah, waxaa suurtogal ah in lagu gaaro dhalidda ugu badan ee yaanyo noocyo aan caan ahayn "Cornabel" oo rumaysad wanaagsan leh, iyada oo aan u adeegsanin isticmaalka kiciya kiimikada.
Si kastaba ha noqotee, ma aha daroogooyinka oo dhan oo kiciya khudradda ayaa waxyeello u geysanaya deegaanka iyo caafimaadka kuwa ku raaxaysan doona goosashada.
Sayniska casriga ahi wuxuu bixiyaa qoyaan badan oo loo yaqaan "biostimulants", oo u oggolaanaya in lagu gaaro wax-soo-saarka wanagsan mararka qaarkood, iyada oo tayada iyo tayada ecologiga ee miro-siintaas aan la dhibin. Daawooyinkan oo kale si loo kordhiyo wax soo saarka tamaandhada waxaa loo yaqaan "Bud", "Ovary", "Bioglobin", iwm. U isticmaalaan tilmaamaha, iyo yaanyadaada ayaa ku farxi doona dhalidda ugu badan adigoon "wax khatar ah" lahayn.
Caadi ahaan, yaanyada oo dhan waa la koray si loo ilaaliyo gebi ahaanba.
Marka hore, waa mid aad u habboon, sababtoo ah miro iyo nadiif midabkoodu wuxuu ku habboon yahay weel kasta oo loogu talagalay iskuxiridda, si fudud ugu gudbaya qoorta, iyo sida ugu haboon markaa laga saaro; Marka labaad, banaanadani waxay u muuqdaan kuwo aad u wanaagsan.
Waxaa laga yaabaa inaad xiiso u leedahay in aad barato cuntada sida loo kariyo yaanyada iyaga oo udub dhexaad ah iyo suugada yaanyada.
Yaanyo kala duwan oo yaanyo ah waa mid aan laga reebin. Waxay leeyihiin maqaar cufan waxayna awood u leeyihiin inay u adkeystaan ​​saameynta marinada kulul iyada oo aan la jajabin.
Si kastaba ha ahaatee, midhaha geedka this, sababtoo ah dhadhan fiican, waxay ku haboon tahay saladh, iyo waa mid aad u wanaagsan inaad cunto sida yaanyada sida gebi ahaanba beerta, sida had iyo jeer, waa mid aad u karis iyo dhadhan fiican leh. Hab kale oo dhaqameed kale oo loo adeegsan karo yaanyada "kareem" waa qalajinta ama qalajinta. Tamaandhada qorraxda waa qaali dhab ah oo aad qaali u ah, halka guriga dhexdiisa ay fududahay in la sameeyo diyaargarow taas oo ka badan si loo ilaaliyo dhalada yaanyo leh milix, geedo iyo geed isbari.
Waa muhiim! Waxaa la caddeeyey in ay tahay in yaanyo la qalajiyey in xaddiga ugu badan ee maaddooyinka waxtarka leh ay xoogga saaraan baaxada wax soo saarka. Maaha wax la yaab leh, sababtoo ah hal kiilo oo "kareem" cusub waxaad heli kartaa celcelis ahaan 100 g oo keliya oo la qalajiyey!
Soo koobid, yiraahdo yaanyo "Cornabel" waa u qalmaa astaamaha ugu sarreeya.
U hubso inaad ku beerato boggaaga duurka yar yar ee iskudhafka Faransiiska, tani waxay noqon doontaa mid ku filan in ay ku raaxeeysato faro badan oo macaan ah sida yaanyada oo dhan qoyska inta lagu jiro xagaaga iyo, sidoo kale, si loo hubiyo in la helo cunto wanaagsan oo fiitamiin ah oo jilicsan jiilaalka!